» स्वर्गीय श्रीकृष्ण श्रेष्ठका हेर्नैपर्ने ५ चलचित्रहरु
१५ चैत्र २०७५, शुक्रबार २१:५१
चन्द्र घलान, हेटौँडा, १५ चैत । नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ अहिले यो संसारमा जिवित छैनन् तर उनले जिवन्त अभिनय गरेका चलचित्रहरुले उनी यो संसारमा बाँचिरहेकै आभाष गराउँछ । उनको अभिनय र चलचित्रमा उनले निभाएका पात्रहरु युगौँयुगसम्म चलचित्रको कथामा बाँचिरहने छ ।
मिजासिला स्वभावका उनले जीवनमा त्यस्ता केही नकरात्मक टिप्पणी पाएनन् जसले उनको सम्झनालाई धमिलो बनाईदिओस् । असल स्वभावका कारण उनी धेरैको स्मृतिमा अझै छाईनै रहेका छन् । उनी वि.सं. २०२४ साल पुस १४ गते काठमाडौँको बागबजारमा जन्मिएका हुनु । उनका बुवा राधाकृष्ण श्रेष्ठ र आमा जगत कुमारी श्रेष्ठ हुन् । परिवारमा छैठौँ अर्थात कान्छो छोराका रुपमा जन्मिएका उनी सानैदेखि सुशिल र शान्त स्वभावका थिए । श्रीकृष्ण श्रेष्ठको मृत्यू वि.सं. २०७१ साउन २४ गते बोन क्यान्सरबाट भएको थियो । यद्यपी उनको मृत्यूको घोषणा भने साउन २५ गते बिहान मात्र गरिएको थियो । लामो समयसम्म प्रेम सम्बन्धमा रहेकी नायिका श्वेता खड्कासँग विवाह गरेको करिब एक महिना पछि नै उनले श्वेतालाई एक्लै छाडेर गएका थिए ।
२) सुख–दुःख – स्वर्गीय श्रीकृष्णको अर्को सुपरहिट चलचित्र हो ‘सुख–दुःख’ । बुढेसकाल लागेका आफ्ना आमाबुवालाई वृद्धाश्रममा राख्ने अनि आफुखुशी भड्किलो जिन्दगी जिउनेहरुकाबिच रुमल्लिएको पारिवारिक सम्बन्धमा आधारित चलचित्र हो ‘सुख–दुःख’ । चलचित्रमा श्रीकृष्ण हजुरबुवा र हजुरआमालाई माया गर्ने नातिको रोलमा छन् । पारिवारिक पृष्ठभूमिसँगै सुरु भएको चलचित्रले जिन्दगीलाई सुख–दुःखको समिश्रणका रुपमा ब्याख्या गरेको छ । चलचित्र मुलतः तिन पुस्ताको कथा वरिपरि घुमेको छ । चलचित्रलाई स्वर्गीय शिव रेग्मीले नै लेखन र निर्देशन गरेका हुन् । चलचित्रमा स्वर्गीय श्रीकृष्णसँगै चर्चित कलाकारहरु मदनकृष्ण श्रेष्ठ, मिथिला शर्मा, झरना थापा लगायका कलाकारहरु रहेका छन् । यस चलचित्रका गीतहरु पनि सर्वाधिक रुचाइएका थिए ।
यो सामाग्री तयार पार्दाको समयमा यो चलचित्र युट्युबमा उपलब्ध छ । चलचित्रलाई २९ लाख ३४ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । चलचित्रमा ८ हजार ५ सयभन्दा बढी लाईक गरिएका छन् ।
३) जिवन रेखा – चलचित्र ‘जीवन रेखा’ नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठको चर्चित चलचित्रहरुमध्ये एक हो । चलचित्र मुलतः पारिवारिक प्रेममा आधारित छ । चलचित्रमा उनी आज्ञाकारी सन्तानको भूमिका छन् । आमाबुवाको आफ्ना सन्तानप्रतिको प्रेम र अभिभावकत्व अनि सन्तानको आमाबुवा प्रतिको जिम्मेवारीलाई चलचित्रमा निकै कलात्मक र मार्मिक ढङ्गले तयार पारिएको छ । चलचित्रमा श्रीकृष्णसँगै चर्चित कलाकार निर शाह, विपना थापा, सुनिल थापा, रेखा थापा लगायतको अभिनय रहेको छ । दिर्घ गुरुङको छायाँकन रहेको चलचित्रलाई सुरज सुब्बा नाल्बोले लेखेका हुन् । चलचित्रलाई प्रतिदप श्रेष्ठले निर्देशन गरेका हुन् ।
यो सामाग्री तयार पार्दाको समयमा यस चलचित्रलाई युट्युबमा हेर्न सकिन्छ । यस चलचित्रलाई यो सामाग्री तयार पार्दाको समयमा ५ लाख २ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । चलचित्रमा करिब १ हजार ४ सयभन्दा बढी पटक हेरिएको छ ।
४) पाहुना – नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठको चर्चित चलचित्रहरुमध्ये ‘पाहुना’ एक जीवनको महत्व दर्शाउने चलचित्र हो । वादी समुदायको समेत थोरै कथा समेटिएको चलचित्रमा उनी एक गायका रुपमा देखिएका छन् । चलचित्रले हामी यस संसारका पाहुना मात्र हौँ, एकदिन सबैले संसार छोड्नैपर्छ त्यसैले सबैलाई माया गर्नु जरुरी छ भन्ने कुराहरुलाई जोड दिन्छ ।
चलचित्रमा श्रीकृष्णसँगै करिश्मा मानन्धर, दिलिप रायमाझी, झरना थापा, केशव भट्टराई लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । शिव रेग्मीको लेखन निर्देशनमा बनेको चलचित्रका गीतहरु समेत चर्चित छन् । यो सामाग्री तयार पार्दाको समयमा यो चलचित्र युट्युबमा उपलब्ध छ । यस चलचित्रलाई ५ लाख १३ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । चलचित्रमा २ हजारभन्दा बढी लाईक गरिएका छन् ।
५) कोहिनुर – चलचित्र ‘कोहिनुर’ स्वर्गीय नायक श्रीकृष्णको अन्तिम चलचित्र हो । उनको मृत्यूको समयमा प्रदर्शनमा आएको यस चलचित्रले त्यस समय नेपाली चलचित्रको ईतिहासमै सर्वाधिक रेकर्डहरु तोडेको थियो । यस चलचित्रमा उनी आफ्नी जीवनसाथी नायिका श्वेता खड्कासँगै देखिएका थिए । यस अघि उनीहरुको श्रीमान श्रीमती र कहाँ भेटिएला जस्ता चर्चित चलचित्र प्रदर्शन भएको थियो । कोहिनुरमा श्रीकृष्ण एक यस्ता युवाको भूमिकामा देखिएका छन् जसले चेलिबेटी बेचबिखनको जालोलाई तोडिदिन्छन् ।
नेपालबाट भारतको कोठीमा पुराइएका चेलीहरुको कथा समेटिएको चलचित्रमा श्रीकृष्ण र श्वेतासँगै मिथिला शर्मा, सम्राट सापकोटा लगायतका कलाकारहरुले अभिनय गरेका छन् । आकाश अधिकारीको कथा र निर्देशनमा बनेको चलचित्रका गितहरु समेत सुपरहिट छन् । यो सामाग्री तयार पार्दाको समयमा चलचित्रलाई २८ लाख ७८ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । चलचित्रमा १२ हजारभन्दा बढी लाईक गरिएका छन् ।